ICarbomer, iCarbopol, iPolyethylene Glycol-Yinuoxin
Qingdao Yinuoxin New Material Co., Ltd.ise kwisixeko esihle kunxweme Qingdao, kwimpuma Jiaozhou Bay, kufutshane Qingyin Expressway. Ecaleni kwesikhululo seenqwelomoya iQingdao Liuting, eHuangdao Isikhongozelo Terminal, Qingdao Port, Rizhao Bulk Cargo Terminal, ukuthuthwa lula kwaye agudileyo. Inkampani yethu inelungelo lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle, kwaye lishishini elivelisa uthotho lwezongezo zerabha kwaye ithengise iimveliso ezikumgangatho ophezulu zemichiza.
Sinobungcali, inqanaba eliphezulu, inkonzo yokuthengisa esemgangathweni kunye nabasebenzi bolawulo
Nokuba iyathengiswa ngaphambili okanye emva kwentengiso, siya kukubonelela ngeyona nkonzo intle, sikuvumela ukuba uqonde kwaye usebenzise iimveliso zethu ngokukhawuleza.
Ukusukela oko yasekwa kwiminyaka esibhozo eyadlulayo, inkampani izibophelele ekunikezeleni ngemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nezikumgangatho ophezulu kubathengi basekhaya nakumazwe aphesheya.
Iimveliso zethu zinomgangatho olungileyo kunye nodumo, olusenza ukuba sikwazi ukuseta amasebe amaninzi kunye nabasasazi kwilizwe lethu.